Toeram-pisakafoanana scaffolding jack any China ho an'nylocklock, boaty na H frame sns Zhongming
Ny fampiharana ny jack base: Ampiasaina amin'ny fantsom-by sy scaffold amin'ny vy izy io amin'ny fizotran'ny fananganana mba hanitsiana ny haavon'ny scaffolds sy ny firafitry ny fantsom-pohy, ny lanjan'ny fandanjana ary ny fitondrana entana. Ampiasaina indrindra amin'ny dingan'ny fanamboarana fandrotsahana simenitra fananganana. Miaraka amin'ny fampivoarana haingana ny trano sy ny fitaterana telo habe tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny habetsaky ny tafo fanohanana dia nanao fandrosoana haingana ihany koa.
Fanasokajiana ny jack jack:
1. Raha ny ampahana ampiasaina dia azo zaraina ho fanohanana ambony sy fanohanana ambany izy io
① Ny tohana ambony dia ampiasaina amin'ny tendrony ambony amin'ny fantsom-by, ny chassis dia eo amin'ny farany ambony, ary ny chassis dia manana hemming;
②Ny fanohanana ambany dia ampiasaina amin'ny faran'ny ambany fantsom-by amin'ny fananganana ny tetik'asa fananganana, ny chassis dia eo amin'ny faritra ambany, ary ny chassis dia tsy azo aforitra;
2. Araka ny fitaovan'ny visy dia azo zaraina amin'ny karazany roa izy: jack jack and hollow. Ny visy firaka an'ny jack hollow dia vita amin'ny fantsom-by misy rindrina matevina, izay maivana kokoa; ny jack henjana dia vita amin'ny vy boribory, izay mavesatra kokoa.
3. Araka ny hoe misy kodiarana izy na tsia, dia azo zaraina ho: fanohanana ambony ambony sy fanohanana ambony kodiarana amin'ny tongotra. Ireo jacks misy kodiarana dia mazàna no ampiasaina ary ampiasaina amin'ny faritra ambany amin'ny scaffold azo entina hanamorana ny fampiroboroboana ny fizotran'ny fananganana; jacks tsotra dia ampiasaina amin'ny fananganana tranobe injeniera hanohanana ny fitoniana.
4. Araka ny fizotry ny famokarana visy, ny jack henjana dia azo zaraina ho visy mihodina mafana sy visy mangatsiaka. Ny visy volo mafana dia manana endrika bika sy fandaniana somary avo kokoa; ny visy volo mangatsiaka dia manana endrika bika tsy dia tsara tarehy ary ambany ny vidiny.
Ny fikirakirana ny visy ho an'ny fananganana, ny fizotry ny famokarana ny mpamokatra amin'ny toerana samihafa dia mitovy, ny fandaminana dia tsy mitovy ary ny fanaingoana dia azo zahana amin'ny lafiny dimy:
1) Chassis: ny hateviny sy ny haben'ny chassis dia tsy mitovy amin'ny faritra sy mpanamboatra samihafa.
2) Fanamafisana ny taolan-tehezana: na misy taolan-tehezana mampifandray amin'ny vatan'ny tsorakazo sy ny chassis, amin'ny ankapobeny dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tetikasa, ny tohana lava lava kokoa amin'ny visy dia ampiarahina amin'ny taolan-tehezana manamafy, ary ny ambany ambany kosa manohana zara raha fitaovana.
3) Ny halavan'ny visy dia matetika hatramin'ny 40 ka hatramin'ny 70, ary ny hatevin'ny visy dia φ28, φ30, φ32, φ34, φ38mm, φ38mm amin'ny ankapobeny.
4) Misy fizotry ny famokarana roa amin'ny fanitsiana ny voanjo misy tohana: ny fanariana vy sy ny fametahana endrika. Voanjo Ny karazana voanjo manitsy tsirairay dia manana habe maivana na mavesatra. Misy karazany roa ny endrika voanjo: voanjo lovia sy visy elatra
Scaffold Ringlock adidy mavesatra, Fizaran-tsarimihetsika Ringlock, Jack screw azo ovaina, Fehikibo Scaffolding Ringlock, Sifotra amin'ny fantsom-by vy, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana,